Dhalinta Ugaarsata Qoryaha Yar Yar | Martech Zone
Dhallinta Ugaarsanaya Qoryaha Toogashada
Talaado, Juun 24, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan galay dambi ah inaan burburiyo Soosaarida halkan Indiana sida ugu badan ee ninka xiga. Markaan ka fikiro shaqo soo saarid, waxaan sawiraa nin labbisan oo qabanaya qaar ka mid ah khadadka isku-soo-saarka wax-soo-saarka ee soo noqnoqda. Aragtidayda ayaa laga yaabaa inaysan ka duwaneyn dhalinyarada maalmahan, in kastoo.
Soo-saarka iyo saadka xitaa ereyo xiiso leh ma ahan. Waa duqoobeen. Way caajis yihiin. Way adagtahay in si kale loo sawiro! Runtu waxay tahay in wax soosaarka iyo saadka ay yihiin wax uun laakiin caajis. Soo-saaristu waxay u dhigantaa firfircoonida, otomaatiga xawaaraha sare leh. Saadka wuxuu la mid yahay moodooyinka software-ka adag oo lagu daray teknoolojiyada sii kordheysa ee xiisaha leh sida nidaamyada macluumaadka juqraafiyeed.
Su’aashu waxay tahay sidee buu gobol dhan u baddelaa sida dowlada, waalidiinta iyo caruurtu kaaga fekeraan adiga oo dad badani aysan ogaan waxa dhabta ah ee aad tahay? Hubaal, ololeyaal sumadeyn, suuqgeyn caadi ah oo loogu talagalay dadka wax saameeya sida siyaasiyiinta iyo barayaasha ayaa kaa caawin doona. Laakiin sidee baad u bartilmaameedsaneysaa dadka aad u baahan tahay si aad u buuxiso boqollaal kun oo shaqo dhawr sano gudahood? Taasi waxay ahayd su'aal la i weydiiyay galabta… maxay tahay doozy!
Gobol sida Indiana oo kale ah, halkaasoo xaruntii kuliyadda 4-sano ahayd ay degtay (taasi waa waxa lagu yaqaanno, sax?), Sideed u soo jiidan kartaa dhallinyarada hibada u leh barnaamijyada ganacsiga iyo kuliyadaha ganacsiga ee sannadka 2? Waxaan u maleynayaa inay tahay seddex laab soo jeedin:
Hubinta saamileyaasha waxay aqoonsadaan xaqiiqda qadhaadh ee tirakoobka. Inta badan ardayda ka bilaabata iskuulada 4-ta sano ma dhameystiraan shahaadooyinkooda. Kuwa ka mid ah kuwa qabsada shahaadada koowaad ee jaamacadeed… qaar badan ayaa ku adag inay helaan shaqo macno leh. Saameyn ku lahadlaya ardaygooda C + barnaamijka shahaadada 4-sano ah waxaa laga yaabaa inaanay wax wanaag ah u samaynayn. Taasi waa kiniin adag oo la liqo!
Hubinta waalidiinta inay aqoonsadaan fursadaha si ay ugala hadlaan carruurtooda. Aniga wiilka iskuulka wuxuu ahaa arday dhexdhexaad ah - marka waxay ahayd milatariga oo maalin walba albaabkiisa garaaca. Bill wuxuu ka bilaabay IUPUI taa badalkeedana wuxuu hadda ubaxsaday laba-maamuus weyn oo ah xisaabta iyo fiisikiska. Waxa kale oo uu bilaabay inuu soo jiito deeqo waxbarasho oo uu ka shaqeeyo sidii uu u bari lahaa ardayda kale ee Jaamacadda.
Ujeedada aan ka leeyahay wiilkayga waa tan - haddii aynaan haysan ilaha dhaqaale ee iskuulkiisa, wuxuu si fudud ugala hadli lahaa militariga. Anigu waxaan ahay halyeey mana ka qoomameynayo go'aanka - laakiin ma aanan ogeyn inaan fursado ku haystay da'diisa. Wuxuu sameeyay (oo sameeya) xulashooyin! Haddii barnaamijka shahaadada 4-ta sano ah uusan shaqeyn lahayn, wuxuu ahaan lahaa rajo dugsi xirfadeed oo gaar ah (muxuu taasi u muuqdaa mid xun?). Isaga iyo aniga kama aanan ka warqabin taas, in kastoo.
Gabi ahaanba fure u ah dadaal kasta oo suuq-geyn ah ayaa ah bartilmaameedka, laftiisa. Halkani waa meesha uu cinjirku ku dhufto wadada. Waxba igama gelin sida wanaagsan ee aad saamaynta ugu leedahay saamaynta iyo suuq u yeelida Hooyooyinka iyo Aabbayaasha… haddii aadan carruurtan dusha ka saareynin, waad dhici doontaa Marka xagee laga helaa? Facebook? Twitter? Moobayl? Ciyaaraha fiidiyowga? Iskuulka? Kooxaha Dhalinyarada?
Haa, meel walba waad ka heli kartaa. Waxaan qabanay shaqo wanaagsan oo ku saabsan barbaarinta caruurteena si ay u dhisaan aqoonsigooda, u fekeraan si ka duwan, u helaan farxad… marka taasi waa waxa ay sameynayaan. Waad heli kartaa gabadhayda qaadashada sawirada oo lala wadaago. Katie sidoo kale waxay ku tijaabisaa fiidiyowyada kamaraddeeda Flip. Iyo dabcan, Instant Messenger iyo taleefankeeda gacanta. Waqti yar, waxay la shiri doontaa asxaabteeda oo la ciyaari doontaa Rock Band.
My boggaga wiilka (si goos goos ah), wuxuu ku jiraa Facebook wuxuuna ku biirayaa asxaabtiisa kale ee muusikada ee MySpace. Marka laga soo tago taas, waxaad ka heli doontaa isaga meelaha uu jecel yahay, Koobka Bean (wuu iga qabtay) iyo Guriga Waffle… Haa, Waffle House.
Dhallinyaradu waxay leeyihiin ikhtiyaar maalmahan waxayna u dagaallamayaan shaqsiyadooda gaarka ah. Dad aad u tiro yar, haddii ay jiraan, wiilasha iyo gabadha saaxiibadood waxay u caasiyoobaan sidii aan yeeli jirnay markii aan yaraa. Way kharribmeen. Waxay leeyihiin alaabo ay ku ciyaaraan. Waxay leeyihiin internetka. Way is leeyihiin. Ma jecla magacyada ama in la maamulo. Waxay jecel yihiin cagaar. Waxay rabaan inay badbaadiyaan Dhulka… waxkastoo macnaheedu yahay.
Taabashada dhalinyarada maalmahan waxay qaadataa in kabadan dhowr habab si wanaagsan oo loo qaabeeyey soogalitaankii waagii hore. Waxaan xasuustaa markii ay ahayd in ay sameyso Nike oo dhan inay socodsiiso meelaha sare ee ugu sareeya filim si ay u garaacaan iibka. Maalmahan, carruurtu waxay rabaan inay helaan kabo isboorti oo aan cidina haysan.
Hadaad dhalinyaro ugaarsato, waxaad sifiican uheshaa qori. Xukumaya Google, Youtube, Flickr, Facebook (waxaa laga yaabaa inuu yara da 'yahay), MySpace, goobta muusigga, suuqa weyn, ciyaaraha fiidiyowga, taleefannada gacanta iyo Dukaanka Dukaanka ee deegaanka ama Waffle House ayaa noqon kara bilow wanaagsan!
Taladaydu waxay tahay inay sahlanaan karto in meel loo fidiyo dhalinyarada be intii aad aadi lahayd meesha ay joogaan waa. Waan ogahay sida qadarinta leh ee ubadkeenu uga mid ahaayeen kooxaha dhalinyarada heer gobal iyo kaniisad halkaas oo ay kuwada hadli karaan, ku hadli karaan, ku ciyaari karaan ciyaaro fiidiyow ah, welina loogu sheegi karo fariin weyn. Had iyo jeer uma imaan fariinta, laakiin way isu yimaadeen! Meeshaasi uma baahna inay noqoto leben iyo hoobiye, waxay noqon kartaa meel fiican oo khadka tooska ah ah.
Fikradahaaga? Sawir iyo qoraal weyn oo ku saabsan Suuq geynta dhalinyarada waxaa laga helaa barta aragtida.
Tags: favicon firfircoonbarnaamijka softiweerkacufanTusmada Emailkafaviconmatoor faviconbeddelka qaab dhismeedkasoftware iibkawebex beddelaadWordPress
Jun 24, 2008 saacadu markay ahayd 12:32 AM
Farriin weyn! Wax badan ayuu i siiyay si aan uga fikiro, waxaan haystaa dhowr sano ka hor intaan labadayda cunug noqon dhalinyaro, laakiin waan ogahay inay duuli doonto kahor intaanan ogaanin. Waxaan u maleynayaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu xun ee aan sameyno inay tahay inaan carruurta ku riixno kuleejka markay run ahaantii diyaar u ahayn. Waxaa jira ikhtiyaarro kale: militariga, xirfadaha, ururada adeegga.
Jun 24, 2008 saacadu markay ahayd 10:05 AM
Sidoo kale, qof kastaa ma doonayo inuu joogo xafiiska ama shaybaarka maalinta oo dhan. Waxaa jira caruur badan oo ku xirnaa miis 13-kii sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo doorbidaya inay kacaan oo ay sameeyaan wax kale oo aan qorin. Soo-saaristu maahan oo keliya ardayda C. Waxaan aqaanay qaar xariif ku ah shaqooyinka ganacsiga oo doorbidaya inay kacaan oo ay sameeyaan wax jir ahaaneed.
Waxay iga dhigeysaa inaan ka fekero Office Space halkaasoo Peter ugu dambeyntii ku faraxsan yahay inuu ka shaqeynayo shaqaale nadiifin halkii uu ku jiri lahaa cubicle.
Jun 24, 2008 saacadu markay ahayd 10:23 AM
Xaqiiqdii waad saxantahay waxaanan rajaynayaa inaanan la kulmin anigoo sheegaya in si uun shaqooyinkani u ahaayeen ardayda ka hooseysa celcelis ahaan. Ujeeddadaydu waa iska soo horjeedka - shaqooyinkani labadaba waa kuwo xiiso leh, tiknoolajiyad ahaan horumarsan, waxay u horseedayaan shaqooyin aad u wanaagsan oo mushahar ah UMA baahnid shahaadada sanadka 4. Qaar ka mid ah xitaa uma baahna 2 sano!
Runtii waa uun warshad la iska indhatiray. Qof kastaa wuxuu u maleynayaa in si aad u guuleysato aad u baahan tahay Bachelor-ka maalmahan. In kasta oo aan sheegi lahaa inay taasi tahay 'caymis caymis' wanaagsan haddana waxaa laga yaabaa inaanay ahayn waddada ugu raaxada badan uguna miro dhalinta badan ee qof dhalinyaro ah oo doonaya xirfad adag oo abaal marin leh!
Aad baad ugu mahadsantahay fikirkaaga!
PS: Waan jeclahay booska xafiiska!
Jun 25, 2008 at 7: 35 PM
Doug post weyn.
Ahaanshaha "kun sano" I def. ku raac wixii aad halkan ku tidhi oo dhan.
Kula kulan iyaga meesha ay joogaan, oo waxaad ku qaadataa qiiq yar oo qoryaha loo yaqaan 'coke' ah. Waxaad u baahan doontaa
Xarafka PC Load maxay # $ @ # taa macnaheedu tahay?